Waa kuwee farsamooyinka ugu fiican ee lagu dhisayo dib-u-celin xoog leh ee boggayaga internetka?
Istaraatijiyad dhisme habboon oo habboon ee lagu helo habka saxda ah ee loo helo dib-u-celin xoog leh wuxuu had iyo jeer bixin doonaa guulo wanaagsan oo ku socda gaadiidka webka iyo hagaajinta booska lagu cabbirayo liiska SERPs. Ka hor intaanan eegin liistada farsamooyinka waxtarka leh iyo ficillada ugu waxtarka leh si aad u siisid xoogaa dib-u-celin xoog leh ee boggaaga ama blog-kaaga, aan u sheego waayo-aragnimadayda khaaska ah. Waxaan ku talineynaa in la eego habab dhowr ah oo looga hortagayo marka la samaynayo istaraatiijiyad dhisme oo habboon ee SEO ah.
Ka dib dhan, waxaa jira siyaabo fara badan oo loo dhisi karo dib-u-dhiska xoogan. Isla mar ahaantaana, waxaa jira siyaabo badan oo qalad ah oo si sahlan u keeni kara ganaax aad u daran Google, iyo soo kabashada boggaaga badanaaba waa nidaam aad u adag. Intaa waxaa dheer, marka ay timaaddo xagjirnimada, hannaanka waxaa laga yaabaa inuu sidoo kale noqdo mid si buuxda loola dhaqmi karo guud ahaan. Si looga hortago xaaladahan nasiib darrada ah, waa kuwan waa in laga fogaadaa dhammaan kharashaadka:
iibsashada iyo iibinta hawlaha dib u dhiska;
dalbashada nidaam kasta oo nidaamsan oo ah dhismaha isku xidhka;
isbeddel weyn oo lala yeesho xidhiidhada;
oo ka shaqeynaya shabakadaha xidhiidhinta;
abuurista dib-u-habeyn aan dib-u-habayn lahayn oo iyaga oo ku noolaanaya;
isticmaalka tirada, halkii ay ku xiran lahaayeen tayo sare;
qaadashada tallaabo lagu xiriirinayo beeraha ama dib u qabsashada dhalooyinka.
Dabcan, isticmaalida mashruucaan ayaa sidoo kale ku siin kara si deg deg ah oo wakhti gaaban ah loo kordhiyo liiska. Si kastaba ha ahaatee, dhammaantood waxaa lagala qaadi doonaa si lama filaan ah loona ciqaabi doonaa Google, ugu dhakhsaha badan ama ka dib. Xasuusnow, bogagga internetka iyo tayada hooseeya maaha habka aad u tagto dib-u-celin awood leh iyo horumarka dheeriga ah ee leh qiimeynta sare. Taasi waa sababta aad u tixgelineyso in Google uu had iyo jeer ku dadaalayo sidii uu u heli lahaa xiriiryo tayo leh oo keliya, waxaan doonayaa inaan ku tuso farsamooyin iyo farsamooyin dhawr ah oo aan helay ugu macquulsan xilligan. By habka, waxaan dhammaan tijaabiyey on my online ganacsi gaar ah. Halkan waxaa ah sidaad ku heli laheyd dib-u-celin xoog leh natiijooyinka ugu wanaagsan ee SEO:
1. Xidhiidhka Gudaha ee gudaha bogga intarnetka ee buuxa ayaa badanaa la dayacay dad badan. Dabcan, xiriirada gudaha waxay dhab ahaantii ka yimaadeen hal bog ilaa kuwo kale - kaliya hal shabakad. Si kastaba ha ahaatee, ogow, marka la sameynayo mid sax ah oo ku xiran erayo muhiim ah oo dheer, qodobada gudaha waxay ku siin karaan faa'iidooyinka soo socda:
bogga internetka oo dhan;
kala qaybinta isku midka ah ee juice isku xira;
qiimaha hooseeya ee boodhka bogga intarnetka oo dhan;
hagaajinta taraafikada iyo soo dhawaynta boggaagii hore;
isdhexgalka istaraatiijiyadeed ayaa gacan ka gaysan kara darajooyinka muhiimka ah ee muhiimka ah.
2. Maqnaanshaha Ganacsiga ee Deegaanka ayaa ah fursadaha ugu fiican ee dib-u-celin xoog leh ee bogga ganacsiga ee ugu muhiimsan. Hubi inaad hagaajisid jagooyinka raadinta ee degaankaaga iyo inaad xoojiso awooddaada internetka waqti isku mid ah. Dhamaan waxaad u baahan tahay halkan waa inaad ku wadaagtaan guryaha NAP oo isku mid ah oo ku saabsan isku xirnaanta sharaxaaddaada makiinadaha waaweyn ee raadinta sida Google, Yahoo, iyo Bing.
3. Dib-u-habaynta boggaaga bannaanka ah wax aad ufaahin badan, sida faafaahin, ayaa sidoo kale ah farsamo weyn si loo dhiso dib-u-celin xooggan oo ku socda boggaaga ama bloggaaga. Waxaa intaa dheer, waxay noqon kartaa nidaam aad u fiican oo qummani ah si kor loogu qaado wacyigelinta dadweynaha waqti isku mid ah. Ka hor intaanad bilaabin inaad kasbato dib-u-tayo sare leh, hubso in farshaxankaagu uu yahay mid cad, oo sahlan oo la xidhiidha dhegeystayaashaaga intii suurtagal ah. Sidoo kale, iskuday inaad sii wadatid xawaaraha xawaare sarre leh oo leh celcelis ahaan celcelis ahaan soo socota ilaa 2000 pixels. Ku dhaji inaan ka badneyn saddex midab iyo ugu badnaan 2 xaraf. Ha ilaawin inaad abuurto sheeko xiiso leh oo ku haysanaysa qofka raba in uu soo afjaro dhamaadka. Markaad ku dhejiso sawiradaada ugu fiican, u soo gudbi websaydhada ugu dambeeyay - isticmaal adeegyo gaar ah Google, sida "soo gudbinta infografi," "inurl / intitle: soo gudbinta faafaahin," "allintext: soo gudbinta infographic" iwm Source .